Saxafi si weyn loo qadariyo oo sheegay in Manchester United ogolaatay qiimihii ay BVB ku dooneysay Henrikh Mkhitaryan+HALKA UU SAFKA UNITED KA GALI DOONO – Gool FM
Saxafi si weyn loo qadariyo oo sheegay in Manchester United ogolaatay qiimihii ay BVB ku dooneysay Henrikh Mkhitaryan+HALKA UU SAFKA UNITED KA GALI DOONO
Kaafi June 26, 2016
(Manchester) 26 Juunyo 2016. Saxafiga lagu kalsoonaan karo ee reer Italia Gianluca Di Marzio ayaa sabtidii war weyn daaha ka rogay – Manchester United waxa ay gudbisay €38m oo ay ku dooneyso Henrikh Mkhitaryan.
Iyada uu sanad uga harsan yahay qandaraaska Signal Iduna Park, Borussia Dortmund waa u diyaar aqbalida dalab deeqsinimo.
27 jirka u dhashay Armenia waxaa lala xiriirinayey Manchester United tan iyo markii uu xilka tababare qabtay Jose Mourinho.
Di Marzio waxa uu sheegay in hada labada koox kaliya ay u harsan tahay dhameystirka dikumintiyada Henrikh Mkhitaryan kahor inta uusan €38m ee uu Old Trafford ugu wareegayo la gaba gabeeyn.
Sdioo kale saxafiga la jecelyahay waxa uu sheegay habeenkii sabtida in Zlatan Ibrahimovic uu iman doono Manchester si uu u dhameeyo qodobada yar ee ka dhiman heshiiskiisa.
HALKEE AYUU UGA HOBOON YAHAY SAFKA MANCHSTER UNITED?
Henrikh Mkhitaryan oo 2013 laga soo iibsaday Shakhtar Dontesk ayaa noqday xiddig Bundesliga ah balse hada waxa uu u muqdaa mid ku wajahan Manchester United.
Laacibka reer Spain waxaa Chelsea looga soo diray si muran ku jiro xilligii Jose Mourinho, waxa uu hada booska u baneen doonaa Laacibka reer Armenia ee hibada badan.
Zlatan Ibrahimovic waxa uu ku biiri doonaa United toddobaadyada soo socda isaga oo xoojin doona duulaan ay ku dhan yihiin Anthony Martial iyo Marcus Rashford – ololaha dambe waqti u farxad badan Red Devils jamaahiirteeda.
Daniel Sturridge oo difaacay saaxiibkiis Sterling kadib eedeyntii uu la kulmay (Muxuu yiri)
Euro 2016: Xulka Belgium oo iska xaadiriyey wareegga 8-da Koobka Qaramada Yurub markii ay xaaqeen Hungary + Sawirro